प्रत्येक नेपालीको भागमा रू. ५२ हजार पुग्याे राष्ट्रय ऋण | Ekata News
प्रत्येक नेपालीको भागमा रू. ५२ हजार पुग्याे राष्ट्रय ऋण
एकता न्यूज / जेष्ठ १४, २०७८ - शुक्रबार
काठमाडौं । एक जना नेपालीको भागमा ५२ हजार रुपैयाँ ऋण पुगेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारले स्वदेशी र विदेशी ऋण उच्च दरले बढाएपछि प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋणको हिस्सा प्रतिव्यक्ति ५२ हजार ३६९ रुपैयाँ पुगेको हो ।
अर्थमन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ को तथ्यांक अनुसार नेपालको तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जीडीपी०को ३७।३ प्रतिशत हो ।
केन्द्रिय तथ्यांक विभागको अनुमान अनुसार शुक्रबारसम्म नेपालको जनसंख्या ३ करोड ३ लाख ५१ हजार छ । यस हिसाबले हरेरक नेपालीले राष्ट्रिय ऋणलाई बराबर भाग लगाउने हो भने एक जनाको थाप्लोमा ५२ हजार ३६९ रुपैयाँ पर्छ ।
सरकारले लिने सार्वजनिक ऋणलाई मूलतः अर्थतन्त्रको आकारसँग दाँजेर हेर्ने गरिन्छ । यसबाट सरकारले कति ऋण लिएको छ र त्यो ऋणको उपयोगिता कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने जाँच्न सघाउ पुग्छ । धेरै ऋण लिएर देशको विकास निर्माणमा चाहीँ कम खर्च भयो भने सरकारको प्रभावकारीता र कार्यकुशलता कमजोर भएको बुझ्न सकिन्छ ।
सरकारी ऋण अत्यधिक धेरै भएमा मुलुकले ऋण तिर्नसक्ने क्षमता गुमाउँदै जाने र अन्ततः राष्ट्र टाट पल्टिने जोखिम हुन्छ । पछिल्ला वर्षमा ग्रीस, भेनेजुयलाजस्ता मुलुकले यस्तो जोखिम भोगिरहेका छन् । तर, प्रतिव्यक्ति ऋणको हिसाब गरेजस्तो जनताले सरकारको ऋण तिरिदिन चाहीँ मिल्दैन । अर्थात्, एक जनाको थाप्लोमा पर्ने ५२ हजार रुपैयाँ कोही नेपालीले अर्थात्, एक जनाको थाप्लोमा पर्ने ५२ हजार रुपैयाँ कोही नेपालीले ‘म तिरिहाल्छु’ भन्न मिल्दैन । यो केवल हिसाबमा देखाउने कुरामात्र हो ।
विश्वभरिका नेपालीका लागि साङ्गीतिक रियालिटी शो सञ्चालन हुने
एकता न्यूज | जेष्ठ १६, २०७८ - आइतवार
लण्डन । विश्वभरि छरिएका नेपाली प्रतिभालाई चिनाउने र विश्वभर...
कर्मचारीको तलव बढ्यो, कर्मचारीका सन्ततीलाई छात्रबृत्ति र निजामती विद्यालय सञ्चालन हुने
एकता न्यूज | जेष्ठ १५, २०७८ - शनिबार
काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीको मासिक तलबमा दुई हजार...
बालविकास सहयोगी कार्यकर्ताको तलब १५ हजार पुग्यो, विद्यालय जाँदा विद्यार्थीको स्वास्थ्य परिक्षण हुने
काठमाडाैं । सरकारले बालविकास सहयोगी कार्यकर्ताको न्यूनतम तलव १५...
अब पत्रकारको उपचार निःशुल्क, बिमामा ५० प्रतिशत प्रिमियम सरकारले दिने
काठमाडौं । सरकारले पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार दिने...
१० वर्षभित्र डिजल पेट्रोलबाट चल्ने गाडि हटाइने, विद्युतीय गाडी चलाउने सरकारको नीति
काठमाडौं । सरकारले आगामी १० वर्षभित्र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने...
काठमाडौं । सरकारी निकायबाट निषेधाज्ञा अवधिभर चामल, पिठो, दाल,...
बृद्धभत्ता ४ हजार पुग्याे, सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशत वृद्धि
काठमाडौँ । सरकारले बृद्धभत्ता बढाएको छ ।अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले...
काठमाडौं । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण...
कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक सहित पर्यटन काज
सरकारले कर्मचारीलाई पर्यटन काज दिने भएको छ । अर्थ...
अक्सिजन प्लान्ट आयात गर्दा भन्सार छुट
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट विनियोजन...